Atụmatụ Semalt Maka Na-agba ọsọ Blog
Maka nyocha ọ bụla e-commerce, na-ekwurịta okwu na onye ahịa gịbụ isi ihe na-arụ ọrụ. Blogs na-eme ka gị na ndị ahịa gị dị ike. N'ihi ya, ịtinye blog na weebụsaịtị anyị bụ otu n'ime ihe kachasịusoro oru SEO di nma.
Onye ọkachamara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Frank Abagnale na-akọwa akụkụ dị mkpa nke iji blọọgụ dị ka ngwá ọrụ maka ịgbasa nkwurịta okwu na ndị ahịa.
Ihe ị chọrọ ịma
Maka ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla, ịgbakwunye blog pụtara nanị ịnweta ikpo okwu ebe otunwere ike ịkekọrịta posts yana ọdịnaya dị ọhụrụ - dedicado barato. N'ọtụtụ usoro nchịkọta ọdịnaya ejiri, ọ na-enwekarị "blog" na ya.Maka ndi mmepe ozo, ichikota blog nwere ike ibu oru di mfe, n'ihi otutu ndebiri efu na CSS drop-downs. Ihe dị iche dị nausoro nchịkọta ọdịnaya nke onye na-eji maka blog. Nye ọtụtụ ndị, ịgbakwunye blog ga-agụnye kpọmkwem bọtịnụ nke bọtịnụ.Ihe ntinye ederede maka nchịkọta gi nwere ike ịgụnye:
Olee otú iji nweta ndụmọdụ
Ntụle nke ahụmahụ
Ihe gbasara ozi gbasara mkpokọta weebụ gị
Ọrụ pụrụ iche, ngalaba ma ọ bụ ọrụ
Echefula ihe gbasara nsogbu ndị ị na - ahụ maka ịzụ ahịa gị.
Otu nwere ike ịnweta ajụjụ niile mgbe gụnyere blog na mkpokọta. Makadịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike iche na ROI, ụgwọ nkwụzi, ọdịnaya iji bipụta ya, otu esi tinye blog na ebe nrụọrụ weebụ, ịnweta freelancers na ndị mmepena ụdị akpaaka nke blog. Ihe ndị a bụ ihe dị mkpa, ma ha ekwesịghị iwepụta ọtụtụ oge gị.
Echiche nke ịmepụta blog anaghị agụnye ọtụtụ ọrụaka na nhazi mbụ.Nzube nke blog ọ bụla bụ ịmepụta ụzọ dị mma ma dị mma iji kwurịta okwu na ndị ahịa gị. The blog bụ ụgbọala iji mee ka nkwurịta okwu aeme, ọ bụghị nhazi nke ịdebe ebe nrụọrụ weebụ mara mma..
Ị nwere ike ịkwalite nkwalite na blog. Dị ka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo ụbọchị ndị inyom ya, na gịnwere ebe nrụọrụ weebụ n'ịntanetị. Na blog, ị nwere ike ịgụnye onyinye dịka ohere. Dị ka ọmụmaatụ, i nwere ike ịsị "kpọta gị nwanyị gị,ma ị ga - enweta oke ihe ubi kachasị elu. "E nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ị ga - esi jiri ịkpọtụrụ ndị ahịa gị na nkwalite. Dịka ọmụmaatụ:
1. Kwusaa ya na blọọgụ blog. Ị nwere ike iji post post iji kọwaa akụkụ dị iche ichenke akụkọ gị. Nke a ga-ebipụta na permalink.
2. Kekọrịta URL na mgbasa ozi mmadụ. Jiri mgbasa ozi ọha na eze maka ọwa mpaghara iji bipụtara gịpost. Ị nwere ike iji mgbasa ozi ezubere iche nke na-ezo aka n'obodo gị. Mkpokọta mgbasa ozi ọha na eze dị ka LinkedIn na Twitter nwere ike ịbụ ezigbo ebe ịmaliteihe na-eme ka mmadụ na-emepụta ihe.
3. Zipu ozi-e. Chetara ndị debanyere aha gị banyere nkwalite. Cheta inyena njikọ na post na nchịkọta nke ọdịnaya ya.
4. Debe mgbasa ozi Google AdWords. Ị nwere ike iji isiokwu ndị na-ezubere otuihe dị n'ógbè gị. Kwalite ọdịnaya na okporo ụzọ ga - agbaba.
Onye ọ bụla nwere ike ịmalite ịde blọgụ n'oge ọ bụla. Ulo oru ulo oru a kwadoro eguzobe otutublọọgụ nke na-arụ ọrụ dị iche iche na niche ha. Ọtụtụ weebụsaịtị nwere ike ịba uru site na iji blog eme ihe ọbụna na ọnọdụ autopilot. A blog nwere ikebụrụ ụzọ dị mma ị ga-esi na-ekwurịta okwu mgbe niile na ndị ahịa gị. Ọ na-agụnye atụmatụ dị iche iche dị ka nkọwa na forums, nke na-etoliteihe ndabere nke ezigbo mmekọrịta ndị ahịa.